Apple wuxuu xannibay muujinta gaarka ah ee 'iCloud Relay' ee macruufka 15 gudaha Ruushka | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 17/09/2021 20:00 | macruufka 15, Noticias
IOS 15 iyo iPadOS 15 waxay la yimaadaan mid ka mid ah astaamaha ugu hamiga badan Apple: Gudbinta Gaarka ah ee iCloud ama Relay Gaarka ah ee iCloud. Waa qalab waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha inuu qariyo IP -ga mar walba ka hortagga adeegyada inay helaan astaanta goobta. Apple waxay ku dhawaaqday beta 7 ee macruufka iyo iPadOS 15 inay ka tagi doonto shaqada qaab beta dadweyne ah waxaana si rasmi ah loo siideyn lahaa laakiin waa naafo. Dhowr bilood ka hor Apple waxay ku dhawaaqday waddamada qaarkood inaysan arki doonin hawshan sababo la xiriira dhibaatooyin xagga sharcigooda ah. Maanta taas waan ognahay Gelitaanka Ruushka ee muuqaalkaan ayaa la xanibay waxaana laga yaabaa in lagu daro liiska waddamada aan muuqaalka laga heli doonin.
Gudbinta Gaarka ah ee iCloud ma arki doonto iftiinka Ruushka
Bishii Juun, Tim Cook wuxuu xaqiijiyey in iCloud Relay Gaarka loo leeyahay ma gaarin Belarus, Kolombiya, Masar, Kazakhstan, Saudi Arabia, South Africa, Turkmenistan, Uganda iyo Filibiin. Wareysiga, wuxuu ku xaqiijiyay in aysan jirin wax caqabad ah oo aan ahayn sababo sharciyeed dal kasta. Sidaa darteed, noocyada ugu dambeeya ee macruufka 15 iyo iPadOS 15 ma soo bandhigi doonaan hawshan oo haddii ay dhacdo in la helo waddanka ma heli lahayd adeegsi.
Gudbinta Gaarka ah ee iCloud mar dambe laguma taageero Ruushka pic.twitter.com/df4z1q0gLQ
Dhowr saacadood ka hor tweets -ku waxay bilaabeen inay soo baxaan iyo Noticias adeegsadayaasha leh iOS iyo iPadOS 15 betas kuma daawan karaan iCloud Relay Gaarka ah ee Russia. Xaqiiqdii, farriin ayaa soo bixi doonta oo leh: 'iCloud Relay Gaarka ah lagama heli karo gobolkan'. Sidaa darteed, Apple ayaa laga yaabaa inay xayirtay astaamaha Ruushka. Sidaa darteed, waxaa lagu dari doonaa waddamada aan aaladda laga heli doonin bilowga rasmiga ah ee nidaamyada hawlgalka. Sidoo kale lagu fidin karo macOS Monterey, laga yaabee.
ICloud Private Relay wuxuu adeegsadaa laba server oo kala duwan qari IP -ga isticmaalaha iyo goobta. Adeega kowaad IP -kii asalka ahaa waa la tirtiray marka labaadna signalada ayaa lagu soo rogay server -ka loo socdo. IP-ga la diray waa cinwaan been ah oo juquraafiya IP-kii asalka ahaa si ay u awoodaan inay helaan waxyaabo gaar loo leeyahay. In kasta oo cinwaanka IP -ga ee adeegsaduhu uu qarsoon yahay oo uu ka horjoogsanayo server -yada inay abuuraan astaamo daalacashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Apple wuxuu xannibay macruufka 15 ee iCloud Relay Gaarka ah ee Ruushka